တရုတ်အရည်အသွေးမြင့် Plate Tube လေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်စက်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - XTLASER
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ပြားနှင့် Tube လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် > ပြား Tube လေဆာဖြတ်တောက်စက်
Plate Tube လေဆာဖြတ်စက်
အဆိုပါ Plate Tube လေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏ 1.Product နိဒါန်း
XTLASER & reg; Plate Tube လေဆာဖြင့်ဖြတ်တောက်သောစက်အတွက် ၁၇ နှစ်ထုတ်လုပ်သူ။ CE, FDA & ISO လက်မှတ်။ XTLASER & reg; Excellent ကဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပညာ, Fiber လေဆာစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ။ အီး & FDA က & ISO ။ XTLASER & reg; စက်အရည်အသွေးနှင့် Aftersales ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးကောင်းသောဂုဏ်သတင်း။
2. Plate Tube Laser Cutting Machine ၏ 2.Product Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
XTC-F1530HT … XTC-F1545HTâ† XTC-F1560HTâ† XTC-F2040HTâ† XTC-F2060HT
1510x3050mm →†1510x4550mmâ-†1510x6050mmâ--† 2030 ×4050mmâ-† 2030x6050mm
â‰140m / min
3. Plate Tube Laser ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏ပစ္စည်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း
Plate Tube လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏အဆင့်မြှင့်ထားသောအစိတ်အပိုင်းအသစ်များပါဝင်သည်
ခေါင်းဖြတ်ခြင်း: Raytools တံဆိပ်သည်အရည်အသွေးကောင်းသည်
2.Fiber laser: အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Raycus တံဆိပ်နှင့်လေဆာ 1000w, 1500w, 2000w, 3000w, 4000w ။
၃။ အအေးပေးစနစ် - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အအေးခံစနစ်များ၊ အအေးခန်းအပူချိန်များကိုဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည်။ အအေးပေးသည့်သတ်မှတ်ထားသောအပူချိန်အအေးယူနစ်ထက်ပိုသောရေအပူချိန်ကိုဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည်။ အအေးယူစက်သည်သတ်မှတ်ထားသောအပူချိန်အအေးအောက်ရှိရေအပူချိန်ကိုအလိုအလျောက်ရပ်တန့်စေသည်။
4.Contral စနစ်: ဂျပန်မှ Fuji
5. ဂီယာနှင့်ထိန်သိမ်း: အလွန်ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှုနှင့်ထိုင်ဝမ်မှ T-win ။
4. Plate Tube Laser ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
1.Pneumatic Chuck ဒီဇိုင်း
ရှေ့နှင့်နောက် Chuck clamping ဒီဇိုင်းသည်တပ်ဆင်ခြင်း၊ အလုပ်ချွေတာခြင်းနှင့်အ ၀ တ်လျှော်ခြင်းတို့အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ နို့တိုက်ကျွေးမှုနှင့်ဖြတ်တောက်မှုတိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေခြင်း၊ အလယ်ဗဟိုမှအလိုအလျောက်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ထိရောက်မှု။
2.Aerospace လူမီနီယံ gantry
ss အတွက်ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်ညှပ်စက်၏အာကာသလူမီနီယံကိုအာကာသအဆင့်အတန်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ အတုအိုမင်းခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းချက်ကုသမှုပြီးနောက်, ပြီးဆုံးသည်။ မာကျောမှုသည် T6 သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောခိုင်မာခြင်းနှင့်ပျော့ပြောင်းခြင်း၏လက္ခဏာများရှိသည်။
အလေးချိန်ပေါ့ပါးခြင်း၊ မြန်နှုန်းမြင့်လှုပ်ရှားမှုအတွက်အဆင်ပြေစွာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ တိကျမှန်ကန်မှုကိုတွေ့သောအခါ၎င်းသည်အပြောင်းအလဲမြန်နှုန်းကိုများစွာတိုးနိုင်သည်။
၈ မီလီမီတာသံမဏိပိုက်ဖြင့်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အပူချိန်မြင့်မားစွာဆေးကြော။ ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်စက်မှဖြစ်ပေါ်သောဖိစီးမှုများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ အသုံးပြုသောလေဆာညှပ်စက်ဆုံးရှုံးမှုကိုနှစ် ၃၀ ကြာအသုံးပြုပြီးနောက်ပုံပျက်။ မပျောက်ပါစေနှင့်။
5. Plate Tube Laser ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏အရည်အချင်း
Plate Tube လေဆာဖြတ်စက်စက်ကြွယ်ဝသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ။ ကျွန်တော်တို့စက်ရုံငယ်တုန်းကလေဆာစက်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးပြီ။ သူတို့ကအလားအလာရှိရင်လေဆာစျေးကွက်ကိုပြောင်းသွားတဲ့တခြားပေးသွင်းသူတွေနဲ့မတူဘူး။ သီးခြား R&D ဌာန။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအတွက်စိတ်ကြိုက်စက်များကိုကမ်းလှမ်းနိုင်ပြီးသူတို့၏သီးသန့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
1ã€ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားပြပွဲများတွင်လစဉ်ပါ ၀ င်ပြီး Plate Tube Laser ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ကိုကမ္ဘာနှင့်အတူမျှဝေမည်၊ စီးပွားရေးနှင့်အသက်တာ၌ရေရှည်သူငယ်ချင်းများကိုကမ္ဘာတဝှမ်းရှိဖောက်သည်အသစ်များနှင့်အတူဖွဲ့စည်းမည်။
အချိန်ကိုက် 2ely €။ တစ်ခုချင်းစီကို Plate Tube လေဆာဖြတ်တောက်စက်ကိုနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲတိကျသောတပ်ဆင်ခြင်းအဆင့်များနှင့်စီစဉ်ပေးသည်။ ပြီးနောက် - အရောင်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အာမခံခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အာမခံသက်တမ်း ၂ နှစ်ပေးသည်။ ကာလအတွင်းမည်သည့်ပြproblemနာမဆိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ အကယ်၍ စက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုပြတ်တောက်သွားလျှင်၊ ဖြစ်ခဲခဲသော၊ DHL မှသင့်အားအသစ်တစ်ခုကိုသင်ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပြီးကုန်ကျမှုအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အလယ်အလတ်အထူနှင့်ပါးလွှာသောစတီးလ်၊ သံမဏိ၊ ကာဗွန်သံမဏိ၊ ကြေးနီ၊ အလွိုင်းစတီး၊
သက်ဆိုင်သောနယ်ပယ်များ - လေကြောင်း၊ လေကြောင်း၊ အီလက်ထရွန်နစ်၊ အသုံးအဆောင်များ၊ မြေအောက်ရထားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်၊ စက်ယန္တရားများ၊ တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများ၊ သင်္ဘောများ၊
သင့်လျော်သော watt ကိုမည်သို့ရွေးရမည်နည်း။
ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်အတွက် watt တွင် 1000w, 1500w, 2000w, 3000w, 400w, 6000w, 12000w, 15000w စသည်တို့ရှိသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောဖြတ်တောက်ခြင်းအထူများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော wattage ။
မင်းရဲ့ပစ္စည်း၊ ပစ္စည်းအထူ၊ စကားလုံး၊
သင့်အားသင့်လျော်သောစံပြ Plate Tube Laser Cutting Machine ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါမည်။
hot Tags:: ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းခြင်း၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ စက်ရုံစိတ်ကြိုက်၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ထားခြင်း, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, တရုတ် အရည်အသွေး, ဖန်စီ